၆ ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေးကို လက်မခံဘူးလို့ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ပြောကြား
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကို တွေ့ရစဉ်
ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်ကို မေးမြန်းချက်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က တိုက်တွန်းထားတဲ့ ၆ ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လက်ခံမှာမဟုတ်ပဲ အဖွဲ့ အစည်းအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ပွဲမျိုးကိုသာ လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ဒီနေ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU နဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ သဘော ထားပေးပေမယ့် ၆ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို လက်မခံဘူးလို့ အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ KNU ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က ပြော ပါတယ်။
"၆ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က လက်မခံပါဘူးခင်ဗျ၊ အကုန်လုံးပါဝင် ပတ်သက်တဲ့ သူတွေအားလုံး တွေ့ဆုံမှသာလျှင် ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ သူအလေးအနက်ထားပြီးပြော ပါတယ်၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံက ပြင်နိုင်ပါတယ်၊ ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သမ္မတကြီးကလည်း ပြောပြီးပြီ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကလည်း ပြင်သင့်တဲ့ဟာ ပြင်မယ်လို့ သူသဘောထားပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ အပြုသဘောဖက်ကနေ ချဉ်းကပ်ပြီးတော့ ရှုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီအခက်အခဲတွေဟာ မကျော်လွှားစရာမရှိဘူးလို့ ကျနော်တို့မြင်ပါတယ်"
ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အားလုံးပါဝင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့၊ KNU အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမယ့် အခြေအနေတွေကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌနဲ့ တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားပြု တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
KNU နဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ဟာ နှစ်လတစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ သဘောတူညီချက်ရယူ ထားတာဖြစ် ပါတယ်။
KNU ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို RFA သတင်းထောက် မဝေယံမိုးမြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်း နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးရေးတွေကို ပုံစံအမျိူးမျိူးနဲ့ တောင်းဆိုနေပေမယ့် တိုင်းရင်းသား လက်နှက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မတည်ဆောက်နိုင်သေးသရွေ့တော့ စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုလည်း ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ NCCT ခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်ဟံသာက သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။
NCCT ခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်ဟံသာကို မသင်းသီရိက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
" အမေအောင်ဆန်းနဲ့တပ်မတော်နဲ့ပြန်လည်သင့်မြတ်မူ့ရှိပါ့မလား ဘာညာဆိုပြီးရေးကြတယ်လုပ်ကြတယ် ကျနော်ပြည်သူလူူထုတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ် ကာချူပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြည်သူတွေအပေါ် တကယ် စေတနာရှိမယ် စိတ်ထဲမှာရှင်းသန့်ထားမယ် ပြည်သူလူူမျက်နာပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးပါတယ် တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုတွေထဲကဖြစ်ပေါ်လာတာပဲမဟုတ်လား ကာချူပ်ကြီးသတိကြီးကြီး ထားပြီးနိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူလူထုတွေကိုကောင်းသောပြောင်းလဲမှု့မျိုးလုပ်ပေးနိုင်ပါစေလိုဆုတောင်းရပါတယ်. "
Nov 30, 2014 12:34 PM
After listening one of the interviews, I see the once-young brave, patriotic Karen youth who was banished and imprisoned in the Coco Island andamain character in the great novel of renowned writer Mya Than Tint has been replaced by the old man who is allegedly fraught with corruption.
The ordinary Karen are honest and I am proud of it. However, many Karen leaders nowadays are going to the opposite way of the Karen people desire. If Saw Ba Oo Gyi, Phado Man Shar and General Mya were still alive......
ကာချုပ်ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ် KNU ကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်ခြင်း
‘သူ့အနေနဲ့ လေးပွင့်ဆိုင် လည်း လက်မခံဘူး။ ခြောက်ပွင့် ဆိုင်လည်း လက်မခံဘူးလို့ ပြော တယ်။ လူခြောက်ဦးတည်းနဲ့ တစ် တိုင်းပြည်လုံးကိစ္စကို ဆွေးနွေးဖို့ ဆိုတာ မပြည့်စုံဘူးလို့ ပြောတယ်’ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပါဝင် ခဲ့သော ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဗဟိုကော်မတီဝင် မန်းငြိမ်းမောင်က ပြောသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ချမှတ်ထားသော မူခြောက်ချက်ကို အသေဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမျိုး မရှိကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအား ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
Nov 30, 2014 09:55 AM
စစ်ခေါင်းဆောင်များ က ပါးစပ်သာကြီးတာပါ ဦးနှောက်ကသေးသေးပါ
၁၄-ပွင့်ဆိုင် က စလို . အနှစ် ၆ဝ ကျော် နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းဖြစ်နေတာကို တယောက် ၁၀ မိနစ်ပြော ဖို. အချိန်ရ တယ်။ ဝလချီးလည်ပြီး ရလဒ်က ဘာမှမဖြစ်ဘူး/ ခြောက်ပွင့်ဆိုင် က စ မှာပါ
Nov 30, 2014 05:02 AM
Min Aung Haling should be careful not to act in the same ways Ne Win and Than Shwe for future Tamadaw.
Nov 29, 2014 09:07 PM